Ehime प्रान्त! सबै भन्दा राम्रो आकर्षण र कुराहरु - Best of Japan
एहीम प्रिफेक्चर एक ठूलो क्षेत्र हो जुन शिकोोक टापुको उत्तरपश्चिममा फैलन्छ। धेरै पुरानो जापानी यहाँ छोडिएका छन्। यस क्षेत्रको केन्द्रमा रहेको मत्सुयामा शहरमा तपाईले नक्कल तातो वसन्त सुविधामा नुहाउन सक्नुहुन्छ। त्यहाँ मत्सुयामा महल पनि छ जहाँ पुराना काठका भवनहरू मत्सुयामामा रहन्छन्। यस क्षेत्रको दक्षिणमा जानुहोस्, तपाईं जंगली पहाड र सागर हेर्न सक्नुहुन्छ।
Ehime को रूपरेखा
Ehime को नक्शा
Ehime प्रान्त Shikoku को उत्तर पश्चिमी भाग मा अवस्थित छ। मौसम नम्र र न्यानो छ, र यो प्रकृतिमा धनी छ। यो सेतो ईन्ल्यान्ड सी, र शिकोको पर्वत पर्वतमाला क्षेत्र हो।
Ehime प्रान्त तीन क्षेत्र मा विभाजित छ। पूर्वी पक्ष शीतोष्ण क्षेत्र हो जुन सेतो ईन्ल्यान्ड समुद्रीतर् सामना गर्नु पर्छ। यहाँ "Shimanemi Kaido" ब्रिज सेटो इनल्यान्ड सागरको अर्को पट्टि Okayama प्रान्त लाई जोड्दै छ। यस पुलमा साइकलको लागि सडक कायम गरिएको छ। यस पुलबाट तपाईं शान्तिमय सेतो इनल्यान्ड सागर देख्न सक्नुहुनेछ।
एहिमेम प्रान्तको केन्द्रिय भाग भनेको मत्सुयामा शहर वरिपरिको क्षेत्र हो। त्यहाँ धेरै प्रसिद्ध स्थानहरू छन् जस्तै मत्सुयामा महल र डोगो ओन्सेन।
अन्तमा, एहिमेम प्रान्तको दक्षिणपश्चिमी भागमा, पुरानो जापानी ग्रामीण इलाका छोडियो। प्रकृति धनी छ, र समुद्र पनि सुन्दर छ।
एहीम प्रान्तमा मत्सुयामा एयरपोर्ट छ। यो एयरपोर्ट मत्सुयामा शहरको केन्द्रबाट kilometers किलोमिटर पश्चिममा अवस्थित छ। यस एयरपोर्टमा, निर्धारित उडानहरू निम्न एयरपोर्टहरूसँग सञ्चालन गरिन्छ।
सप्पोरो / शिन Chitose
मत्सुयामा एयरपोर्टबाट जेआर मत्सुयामा स्टेशनसम्म, यो सिधै बसले १ 15 मिनेट लिन्छ। यो डोगो ओन्सेनमा minutes० मिनेट छ।
Shinkansen Ehime प्रान्तमा चालु छैन। Ehime प्रान्त मा प्रमुख शहरहरू बीच, नियमित रेल सेवाहरू संचालित छन्।
JR Shikoku Yosan रेखा चलिरहेको छ। Yodo लाइन, Uchiko लाइन। यस बाहेक, त्यहाँ एक निजी रेलवे 'Iyo रेलवे' (Iyotetsu) छ। यो रेलमार्ग कम्पनीले Gunchu लाइन, Takamaha लाइन, Yokogawara लाइन परिचालन गर्दछ। Iyotetsu पनि Matsuyama शहर मा ट्राम संचालित।
मत्सुयामा शहर मा मत्सुयामा महल छ। यो किल्ला १ 17 औं शताब्दीमा निर्माण गरिएको थियो। धेरै किल्लाहरू आगोले जलाइएका थिए। इत्यादिका कारण, मत्सुयामा किल्लामा पुराना काठका भवनहरू रहेका छन्। त्यसोभए, त्यहाँ बल छ।
पहाडको शीर्षमा १ 132२ मिटर उचाईसहित, तीन-मंजिला महल टावर छ। यो भवन पनि त्यसरी नै छोडियो जुन यो १ the औं शताब्दीमा बनाइएको थियो।
मैले जापानी महलहरूको बारेमा लेखमा मत्सुयामा महल प्रस्तुत गरें। यदि तपाइँ इच्छुक हुनुहुन्छ भने, कृपया तलको लेखमा खसाल्नुहोस्।
>> मत्सुयामा महल को विवरण को लागी कृपया यो लेख हेर्नुहोस्
रेट्रो वातावरणको साथ डोगो ओन्सेन स्टेशन, मत्सुयामा शहर, जापान = शटरस्टक
के तपाईंले हायाओ मियाजाकी एनिमेटेड फिल्म "स्पिरिटेड एभ" (१ 1999 XNUMX?) देख्नु भएको छ?
भनिन्छ कि त्यो चलचित्रमा देखा परेको पुरानो काठको सार्वजनिक बाथहाउस एहिम प्रान्तमा "डोगो ओन्सेन होनकन (मेन बेल्ट)" को सन्दर्भमा कोरिएको थियो। यो भवन हो जुन यस पृष्ठको शीर्ष चित्रमा देखिएको छ।
"डोगो ओन्सेन होकन" धेरै पुराना काठको भवनहरू समावेश गर्दछ। सबैभन्दा पुरानो तीन-मंजिला काठको भवन "कामिनो यू" (निर्माण क्षेत्र १ 193.31 .1894१ वर्ग मिटर) १ XNUMX XNUMX in मा निर्माण गरिएको थियो। यो भवन जापानी प्रसिद्ध लेखक सोसेकी NATSUME द्वारा उपन्यास "BOTCHAN" मा पनि देखा पर्‍यो। तपाईं यस भवनमा नुहाउन सक्नुहुन्छ।
डोगो ओन्सेनको 3000००० बर्षको ईतिहास छ भनिन्छ। तपाईं यस स्पा शहर को रेट्रो वातावरण द्वारा निको हुनेछ।
Io रेलवे ट्राम द्वारा डोगो ओन्सेन मत्सुयामा शहर केन्द्रबाट करिब २ 25 मिनेटको दूरीमा छ।
>> डोगो ओन्सेन होन्कानको विवरणहरूको लागि कृपया आधिकारिक वेबसाइट हेर्नुहोस्